You are at:Home»स्वास्थ्य»के हो ग्लुटेन ? किन यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ?
By bktnews Posted on	 October 20, 2021 स्वास्थ्य
काठमाडौं । अहिले धेरैले चामलको विकल्पमा गहुँको रोटी खाने गर्छन् । कतिपय रोगको कारण होस् वा तौल घटाउने चक्करमा, रोटी उपयुक्त हुने बुझाई धेरैको छ । यद्यपि गहुँको रोटी एवं गहुँको पिठोबाट बनेको परिकार वास्तवमै लाभदायक हुन्छ त ?